Amaphupho ngendlu nekhaya – iAfrika
Uma uphupha ukuthi ubuka ngaphandle ewindini uzoxazulula inkinga maduzane. Uma iwindi lifile uzoba nenkathazo maduzane. Qaphela ukuphephisa indlu yakho ezigebengwini.
Uma uphupha ukuthi ubona izindonga zomuzi wakho kusho okubi ekusaseni lakho. Uma zinopende omanzi kusho ukuthi uzontshontshelwa izinto zakho. Uma uhlukaniswe kumuntu omthandayo yizindonga kusho ukuthi uzoba nobunzima ikakhulukazi uma uzama ukuzigibela izindonga kodwa uhluleka.
Uma uphupha ukuthi usengadini kusho izinto ezinhle empilweni yakho. Kusho ukuthi uzoba nomshado omude nezingane eziphumelelayo ikakhulukazi uma okutshaliwe kuluhluza kukhula kahle.
Uma uphupha ukuthi ubona ikhabethe kungaba kuhle noma kube kubi. Uma uligcwalisa kusho ukuthi ngisho kube khona izimbuyiselamuva uzothuthuka maduzane. Uma lingenalutho uma ulivula kusho ibhadi maduzane ikakhulukazi emsebenzini.
Amaphupho ngamakamelo okulala
Uma uphupha ukuthi usekamelweni lakho lokulala kusho ukuthi yonke into oyifunayo izofezeka.
Kusho okuhle ukuphupha ikhaya owazalelwa kulona futhi waphinda wakhulela kulona, futhi uphupha ulibona lelokhaya wenza nezinto owawuzenza khona; ngokwesibonelo, uma uphupha usekhaya elidala kukhona nezingane okhule nazo nidlala ndawonye. Uma uphupha ikhaya ube ungumuntu osemathandweni kukhona ohlekisana naye, lokho kusho ukuthi uthole umuntu oqotho, buzoba buhle ubudlelwane benu futhi bungaphetha ngomshado ozoba nenjabulo. Uma indoda … Read more